AMPASINA-MANINGORY : Lehilahy iray namono tena rehefa avy nanatsatoka antsy ny vadiny
Nandriaka ny ra tao amin’ny fokontany Ankoba-Avaratra, Kaominina Ampasina-Maningory, distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana, Faritra Analanjirofo, ny alin’ny talata 26 novambra, tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany. 28 novembre 2019
Resaka raharahan-tokantrano niafara tamin’ny fifamonoana no nitranga. Efa nisara-panambadiana iray taona teo ho eo i Ramatoa Lidy sy ilay rangahy vadiny. Ny vadiny izay fantatry ny mpiara-monina amin’ny anaran-jaza hoe : baba Franck. Tao anatin’izay iray taona nisarahana izay, dia tsy nitsahatra niezaka namerina an’i Lidy ho vady indray i baba Franck. Tsy nety niverina intsony anefa i Lidy. Ity farany izay sady efa nanambady olon-kafa, dia tovolahy antsoina hoe : Tony, mipetraka ao Anjoba Fenoarivo-Atsinanana.
Ny alin’ny talata 26 novambra, nitontonan’i baba Franck tampoka tao an-trano tao Ankoba-Avaratra i Lidy. Nohidiny avy any anatiny ny trano. I baba Franck izay efa nivatsy antsy maranitra. Vokany, notaperiny ny ain’i Lidy sy Thony. Nisy tovolahy iray tao an-trano izay zana-drahahavin’i Lidy niezaka mba nisakana izao fihetsika feno habibiana nataon’i baba Franck izao saingy tsy nahatohitra ihany koa ka naratra mafy ary tapaka ny tanany.
Taorian’ireo fihetsika nataony, dia nanapa-kevitra namono tena i baba Franck. Nahatratra telo araka zany ireo faty nitsitra sy nafoy tao amin’ilay trano tamin’izao raharaha izao : baba Franck, Lidy ary Thony. Iray kosa no naratra, dia ilay tovolahy mba niezaka nisakana. Ity farany izay nalefa notsaboina any amin’ny Hopitaly Be Fenoarivo-Atsinanana. Tranga tao Ampasina-Maningory ity maneho fa mandoro ny fitiavana raha ny fo hatrany no mibaiko.